Erin Schrode dị afọ 25 na-agba ọsọ maka Congress - Omenala
Erin Schrode dị afọ 25 chọrọ ka ọ bụrụ nwanyị nke ọdụdụ ahọpụtara na Congress
Site n'ikike nke Erin Schrode
Mgbe ole Erin Schrode mara ọkwa atụmatụ ya ịzọ ọchịchị Congress, ọ naghị anwa ịme akụkọ ihe mere eme-onye ndọrọndọrọ dị afọ iri abụọ na ise ga-abụ ụmụnwaanyị kacha nta ka a họpụta ha n'ụlọ. Nanị ihe ọ chọrọ bụ ime mgbanwe dị mma n'obodo ya site na ịnọchite anya mpaghara nke abụọ nke California. Schrode etinyela ihe karịrị afọ iri n'ịkwalite ụwa. Enweghị ozi ederede 90999 iji nye Red Cross $ 10 ma kpọọ ya otu ụbọchị. Mgbe ala ọma jijiji na-emebi ihe mere na Haiti na 2010, ọ gara Port-au-Prince iji nyere aka na enyemaka enyemaka wee hiwe akpa akwụkwọ, ọrụ mmụta ntorobịa nke na-ewetara ụmụ akwụkwọ ihe. Ọ meela ọtụtụ njem na Gris iji nyere ndị gbara ọsọ ndụ Syria, Afghan na Iraq aka, nyere aka ịhazi atụmatụ mmegharị ihe mepere emepe na Ghana, wee mepụta usoro mmụta gburugburu ebe obibi maka Palestine, Israel, na Jọdan (atumatu atumatu mgbe Schrode na -amụ akwụkwọ na mba ofesi na Israel).
Schrode na -eje ozi ugbu a dị ka onye ndụmọdụ lekwasịrị anya na nkwado gburugburu ebe obibi, a matakwara ya site na White House dị ka nwa agbọghọ na -agbasi ike, onye nwere oke mmụọ na onye nwere oke agụụ, nyefere onwe ya n'ịmepụta nnukwu mgbanwe n'ebe ọ bụla ọ na -aga. ' Nrara ọ raara onwe ya nye ọrụ ọha malitere na nwata, mgbe, mgbe ọ dị afọ 11, ọ na-ele nne ya ka ọ na-agbachitere mgbasa ozi ahụike ọha iji nyochaa ara na-arị elu, prostate, na ọrịa kansa melanoma na Marin County ha, California, obodo. Site n'ike mmụọ nsọ nke nne ya, n'oge na -adịghị anya, Schrode wepụtara atụmatụ nke ya ịchọpụta na ịlụso nsogbu chere ọha mmadụ ihu. Na 2005 - mgbe ọ dị afọ iri na ụma - ọ tọrọ ntọala Na -atụgharị Green .
Ọ bụghị ihe ijuanya, ọrụ nlekọta gburugburu ebe obibi bụ isi nkuku nke mkpọsa Schrode. Amalitere na March 29 na edemede nkeonwe bipụtara na Ọkara , Schrode kwupụtara ọkwa onye ọ ga -azọ site na itinye nkwa nke ọgbọ m. Na mgbakwunye na ịlụ ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, Schrode na -agba ọsọ n'elu ikpo okwu na -aga n'ihu nke na -akọwapụta ịnye nlekọta ahụike dị ọnụ ala, melite agụmakwụkwọ, na ịkpa oke na okike. Anyị hụrụ ya n'ihu isi California iji kwuo maka mkpebi ya ịgba ọsọ, ka ozi ya siri metụta ndị ntuli aka, yana otu ọ ga -esi nọrọ ụbọchị mbụ ya n'ọchịchị.
kedu mgbe oge nke 3 nke nwụrụ anwụ ga -apụta m
Nkwado: Tuzde bụ nnukwu ụbọchị ... kedụ ka ọ dị gị?
Erin Schrode: Ọ dị ịtụnanya. [M na -agba ọsọ] obere ụra, mana [enwere m ike]. Enwere m ekele maka nkwado niile na ngwụcha izu a. Ndị otu anyị nọ na mpaghara niile na ndị mmadụ nwere obi anụrị maka ihe anyị na -eme. Ozi anyị na -ada ụda. Enwere ume n'azụ mmegharị ahụ. Ndị mmadụ na -eme ntuli aka - anyị na -enweta foto nke ntuli aka [onye ntuli aka mbụ]. Enwere m ume nke ukwuu maka echi. Ọ dị mma. Ọ dị ka anyị na -eme ihe ekwesịrị ime n'oge a na akụkọ ntolite. Ọ dị m nwute - ị jidere m n'otu oge ebe m nwere ekele n'ezie. Obi dị m ụtọ maka ihe anyị na -ewu.
Nkwado: Ị nwere ogologo akụkọ ihe mere eme ma na -arụ ọrụ n'ịkwalite obodo. Kedu ihe kpaliri gị ịzọ ọkwa ọchịchị? Na ihe kpaliri gị ime otu ahụ ugbu a ?
Ọ BỤ: Ijere ọha mmadụ ozi bụ mbọ ndụ m niile. M tọrọ ntọala ụlọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ afọ 11 gara aga. Arụrụ m ọrụ gburugburu ụwa na na United States, na -ewere okwu ikpe ziri ezi na -elekọta mmadụ, na -eme ihe ihu igwe, na -ewere ahụike ọha, agụmakwụkwọ, ịha nhatanha nke nwoke na nwanyị, ma na -emegide iwu mebiri emebi oge na oge. N'oge usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị nọ n'oké oke egwu-ebe ọdịbendị na-atụ ụjọ na-achị, ebe enwere oke nkewa, ebe enweghị ihe ọ bụla na-aga n'ihu-anyị chọrọ olu ọhụrụ n'ọchịchị n'ụzọ ka njọ karịa ka ọ dị na mbụ. .
Anaghị m adabara ụdị onye m na -eche banyere ya mgbe m chere onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mana ndị mmadụ [agwala m] ọ bụ ya mere anyị ji chọọ olu [m]. Anyị chọrọ otu ndị nnọchi anya ahọpụtara nke na -anọchite anya akwa obodo anyị nke ọma. Ekwenyesiri m ike na olu ụmụ nwanyị na -aga n'ihu na -ebute amụma dị mma. Ị na -ahụ mmetụta dị mma ụmụ nwanyị na -enwe na ụlọ ọrụ. Ị na -ahụ ọnụọgụgụ. Ị na -ahụ ihe akaebe. Ị nweghị ọnụọgụ ndị ahụ n'ọchịchị n'ihi na anyị ahụtụbeghị na ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ n'ọchịchị na obodo anyị. Anyị bụ pasent 51 nke ndị bi na mana pasent 19.4 nke Congress. Mkpebi ndị a na-eme taa ga-emetụta [ọgbọ m] n'ụzọ na-ezighi ezi na anyị enweghị olu na tebụl mkpebi anyị bụ ndị na-esepụta ọnọdụ ọrụ. Anyị bụ ndị [na -eme] mkpebi nke taa na echi. Kedu onye ka mma ịhazi, kpụzie ma mejuputa atumatu ahụ karịa anyị?
Erin na -ezute ndị na -eto eto Marin County.
Ọmarịcha : Kedu ụdị nsogbu chere gị ihu ịmalite na ịhazi mkpọsa gị? Kedu ka ndị nọ na mpaghara gị siri meghachi omume?
Ọ BỤ: Ewepụtara m ya naanị ya na tebụl m n'obodo m. Edegaara m ụwa akwụkwọ ozi maka ihe kpatara na ụwa nwanyị dị afọ 24 ga-agba ọsọ maka Congress n'ihi na ọ dị m mkpa itinye isi m gburugburu ya. Edere m ya, ezitere m tweet, kesara ya na Facebook, wee nweta iju mmiri nkwado ozugbo. A ga -enwe mgbe niile ndị mmadụ ga -atụda gị. A ga -enwerịrị ndị na -ekwu okwu na ike na -adịghị mma mana ụda olu dị mma emikpuwo nke ahụ.
Otu nwa agbọghọ dere [ka ọ gwa m] Akwalitere m ya. Enwetara m akwụkwọ ozi sitere n'aka nne gbasara ihe mgbasa ozi m pụtara nye nwa ya nwanyị na egosiri m nwa ya nwanyị na ọ ga -ekwe omume ịgbaso nrọ ya. Anya mmiri na -agba m n'anya. Ahụ́ na -ama m jijiji ịgụ [akwụkwọ ozi ndị a]. Mana mgbe ị gbadara n'okwu na ihe ndị ga -eme ma ọ bụ mebie mkpọsa anyị, na ebe m nọrọ ọtụtụ oge m. Arụrụ m ọrụ na amụma n'ọkwa, steeti na gọọmentị etiti. Abụ m onye na -eme ihe ike na onye na -eme mkpọtụ. Ị chọrọ ikwu maka ihe omume ihu igwe? Enwere m ezigbo azịza maka ịkọ ugbo carbon. Ị chọrọ ikwu maka nsị? Ka anyị kwuo maka ndozigharị nsị zuru oke maka ndị kachasị emerụ emerụ nke ọha mmadụ, ọkachasị ụmụ nwanyị na ụmụaka na -enweghị ike. Agụmakwụkwọ na ọrụ? Kedu onye ka mma ikwu maka ọdịnihu mmụta na ọrụ karịa onye gụsịrị akwụkwọ afọ atọ gara aga na -enwe mmetụta nke ụgwọ ụgwọ ụmụ akwụkwọ, onye maara ihe ọ ga -ewe iji jiri nka dị mkpa wee chọgharịa wee banye gburugburu ọrụ. Nke ahụ bụ ihe na -atụgharị ndị ntuli aka ekpe na aka nri na mpaghara anyị.
Nkwado: Onye nnọchi anya onye mmegide mbụ gị Jared Huffman boro gị ebubo na ị na -egwu 'ndọrọ ndọrọ ọchịchị njirimara' na iji afọ gị na okike gị dị ka ihe kpatara ndị mmadụ ga -eji votu gị. Kedu otu ị ga-esi meghachi omume n'okwu dị otu a site n'aka ya ma ọ bụ ndị ọzọ na-achọ ịchụpụ gị n'ihi na ị bụ nwanyị gbara afọ 25 na-azọ ọkwa ọchịchị?
Ọ BỤ: Enwere ọtụtụ ihe karịa na mkpọsa anyị ebe ahụmịhe m, nka na oke agụụ na -enwu karịa afọ m na okike m. Agbanyeghị, ndị ahụ bụ akụkụ nke enweghị njirimara m. Ndị ahụ na -emetụta ụzọ m biri, ụzọ m na -ebi, na ụzọ m ga -ebi. Ha na -agwa m mkpebi [kwa ụbọchị] ha na -agbanwe n'ụzọ dị egwu etu ndị ọzọ si anabata m. Enwere m ikike na ikike [afọ m na okike m], mana ọ bụghị naanị ihe kpatara na ndị mmadụ kwesịrị ịtụ vootu maka m ma ekwela ka nke ahụ funahụ onye ọ bụla. Ka mmadụ kpọọ - ọkachasị otu okenye - ụmụ agbọghọ maka ịbụ nwata na ịbụ nwanyị [bụ ihe nzuzu]. Achọghị m obodo nke narị otu narị ụmụ agbọghọ na -achị, mana ekwenyere m na enwere ọnọdụ maka anyị [na gọọmentị]. Anyị chọrọ ihe dị iche. Anyị chọrọ ihe ọhụrụ. M na -agbakwa ọsọ iweta ọgbọ olu ọhụrụ n'ime ogige ma soro ndị ọgbọ niile na -arụkọ ọrụ. Abụ m nnukwu onye na -akwado ndụmọdụ na mmekorita na mmụta site na ibe. Nke ahụ pụtara [ya na ndị ọrụ] nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe. Mana emebisila ahụmịhe m nwere n'ihi oge m zụlitere, gụ akwụkwọ ma bido ọrụ.
Ọmarịcha : Kedu ka ụmụ agbọghọ ndị ọzọ siri meghachi omume na mkpọsa gị? Enweghị ụmụ nwanyị zuru oke n'ọfịs, hapụ ya na -eto eto ụmụ nwanyị. Ọ na -atọ ha ụtọ na atụmanya nke ịnọchite anya olu ha ma ọ bụ na ị nweela obi abụọ ọ bụla?
Ọ BỤ: Ụmụ agbọghọ, n'ozuzu ha, na -enyere m aka nke ukwuu. Ọ na -adị m ka mmụba a sitere n'aka ndị ọgbọ m. Anụrụ m ọtụtụ ụmụ nwanyị gburugburu ụwa. Echiche nke, Ọ bụrụ na ọ nwere ike ime ya, m nwere ike ime ya - nke ahụ na -akpalite ọgbọ niile. [Enwere m olileanya] na ụmụ nwanyị n'ofe obodo niile chere na ọ ga -ekwe omume ịzọ onye isi nhọpụta.
Nkwado: Ndị omebe iwu nwere ọkwa nkwado dị ala mana mana ndị ntuli aka na -enwe mmetụta na -arapara ma a bịa n'ịhọpụta ndị otu na -anọghị n'ọfịs. Ị na -ahụ mkpọsa gị dịka ụzọ isi gbanwee nke ahụ?
Ọ BỤ: Kpomkwem. Ọgbọ anyị bụ onye na-arụkọ ọrụ ọnụ, nke jikọrọ ọnụ nke ọma, nke kacha mara ihe anyị hụtụrụla. Anyị anọbeghị ọtụtụ iri afọ n'ike n'ike ma anyị dị njikere ịrụ ọrụ n'ofe wara wara. Ka agbụ ndị ahụ na -ebili, otu a ka mmekọrịta na mmekọrịta ahụ ga -adị. Agwara m onye isi ndị ọrụ na nwanyị nwanyị nke ọdụdụ ọgbakọ ruo taa onye bụ onye Republican - Elise Stefanik nke ugwu New York. Onye isi ndị ọrụ ya bụ onye ọrụ mbụ nke onye ọ bụla ahọpụtara ahọpụtara ịkpọtụrụ m n'ihi na ụlọ ọrụ ya niile nwere obi ụtọ na m na -azọ. Nke ahụ na -atọ m ụtọ n'ihi na n'agbanyeghị na anyị nwere ike ghara ịhụ anya n'okwu ndị a, anyị na -amata mkpa ọ dị inwe nnọchite anya ka ukwuu na ọtụtụ [ụmụ nwanyị] olu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọọmentị.
Nkwado: Usoro ntuli aka a yiri ka ọ bụ ndị gbara 'mgbochi mgbochi'. Dịka onye gbara afọ iri abụọ na ise na-eme nhọpụta mbụ ya maka ọfịs yana iji soshal midia ọ bụghị naanị ịgbasa ozi ya mana tinye ndị ntuli aka, ị ga-akọwa onwe gị dị ka onye na-emegide ọka?
Ọ BỤ: N'ezie. Ụjọ anaghị atụ m ikwu nke ahụ. Abụ m onye nzuzu. Abụ m onye ịma aka. A bụ m onye mba ọzọ. Naanị ihe kpatara anyị nwere ike iji gbasaa ụdị mgbasa ozi a bụ n'ihi ike nke igwe mgbasa ozi dijitalụ nke anyị na -eji ike dị nta na -akwụ ụgwọ maka iru oke. Ọ dịghị onye ji anyị kpọrọ ihe mgbe mbụ anyị malitere. Otu nwanyị dị afọ 24 na-ekwupụta mkpọsa ya ọnwa abụọ tupu onye isi ụlọ akwụkwọ na-enwetabeghị ọkwa ahọpụtara? Ihe dị otú ahụ na -emegide nguzobe na Onye isi oche nke DNC kwadoro, onye, ​​mgbe anyị bidoro, nọ ọdụ na ọkara nde dollar [na ntinye ego mkpọsa]. Ugbu a, ọ nwere ihe karịrị $ 600,000 na anyị nwere ihe karịrị $ 60,000-ọ bụ 10-1 emegide anyị. Mana anyị na -akwagide ya n'ụzọ dị mma ma dị irè, na -eme ka ọ kwuo maka okwu anyị butere na tebụl.
Nkwado: N'ikwu maka ego mgbasa ozi, kedu ihe nchịkọta ego maka mgbasa ozi?
Ọ BỤ: Ọ bụ ike . Nke ahụ ọ bụ eziokwu? [ Ọchị. ] Mgbanwe ego mkpọsa adịghị na ihuenyo radar m mgbe anyị malitere mkpọsa a. Ọ bụ ugbu a ogidi isi mgbasa ozi anyị. Ọ bụ ihe mgbochi iji mezuo ụdị mgbanwe ọ bụla. Ọnụ ego ị ga -achọ iji bulie ka ị bụrụ asọmpi bụ ihe nzuzu. A na -atụ anya na m ga -etinye ọtụtụ awa n'ịkpọ oku maka dollar mgbe m nwere ike ịpụ na -agwa ndị mebere ihe gbasara ihe dị mkpa, itinye ndị mmadụ na mkparịta ụka, mmụta, ịga leta, ihe ọ bụla. Nke ahụ anaghị arụ ọrụ maka m. Ọtụtụ ego sitere n'onyinye ala ala obere dollar. Ọnụ ego ahụ bụ $ 2,500 na enweela ụfọdụ ndị na -emesapụ aka nke ukwuu. Anyị enwetabeghị nke ọ bụla - naanị m bịanyere aka na nkwa na Greenpeace - ego ebe a na -eme mmanụ ọkụ. Anyị anatabeghị ego PAC ọ bụla. Obi dị m ezigbo ụtọ na ọ bụ mkpọsa nke ndị mmadụ na-akwado. Anyị na -eme dollar ọ bụla ka ọ gaa ogologo.
Nkwado: Ị bụ ọkaibe na social media mana kedu ka ọ dị mgbe ekpughere akụkụ gbara ọchịchịrị nke nyiwe ndị a - ọkachasị, mgbe ọ dị na -eji n'oge na -adịbeghị anya biputere ozi kọntaktị gị na kpaliri iju mmiri nke ozi mgbochi ndị Juu wakporo gị maka ikpo okwu gị na okwukwe ndị Juu gị?
Ọ BỤ: Ọ na-afụ ụfụ. Ọ na -eme n'ezie. Ejeghị m aka na mkpọsa a. Echeghị m na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ egwuregwu dị ọcha ma mara mma. Atụghị m anya n'eziokwu na m ga -ebuso m agha dị otu a asị. O juru m anya. Na ndị ọzọ tụrụ n'anya. Nke a abụghị naanị maka mgbochi Semitism. Nke a bụ onye nnọchi anya nkwalite okwu mkparị nke anyị hụworo n'oge ntuli aka ntuli aka a. N’eziokwu, anaghị m ekwu okwu ma ọ bụrụ na m lelee ihe niile ọ ga -agba m anya mmiri. Nke ahụ abụghị iwepụta ụdị ọmịiko ọ bụla, achọghị m ọmịiko. Nke a bụ ihe ikpeazụ m chọrọ ka m na -emeso n'ụzọ nkịtị ụbọchị tupu ntuli aka. Ma, otú ahụ ka ọ na -aga. Mgbe ị kwụdoro ụkpụrụ gị ma tinye onwe gị ebe ahụ yana ị nwere njirimara. A na -awakpo ndị mmadụ kwa ụbọchị n'ụzọ ime ihe ike na nke na -emebi ihe karịa dabere na agbụrụ, dabere n'okpukpe, dabere na okike -n'ihe ọ bụla. Ọ dịtụbeghị mgbe m chere na [n'ihu] ma ugbu a ka m dị. O meela ka m kwenye n'ihe m na -eme karịa nke ahụ n'ihi na anyị chọrọ ndị mmadụ iguzogide ịkpọasị na ịkpa oke.
Nkwado: Ị sịla na -emezu nkwa nke ọgbọ anyị. Kedu ihe ị chere bụ ihe ịma aka kasịnụ na -eche ndị na -eto eto ihu taa? Oleekwa otu ha si emetụta ọha mmadụ n'ozuzu ya?
Ọ BỤ: Anyị abụghị ndị dị iche na ọgbọ ọ bụla n'oge gara aga. Anyị bụ ngwaahịa nke oge anyị na -eji ngwa nke oge anyị. Abụ m onye na -eto eto, m na -agwakwa ndị ọgbọ m okwu. Ị na -anụ maka ụgwọ dị arọ nke ụgwọ ụmụ akwụkwọ, nke gụsịrị akwụkwọ na kọleji nwere asambodo nke na -apụtachaghị ihe ọ pụtara, nke iji ji iri iri ma ọ bụ ọbụna narị puku kwuru puku dollar ji ụgwọ. Ọ na -emetụta ọrụ ị na -arụ; ọ na -emetụta ebe i bi. Eleghi anya ị kwaga n'ụlọ, mgbe ahụ ọ bụ ibu ego nye ezinụlọ gị. Enweghị ụzọ iji refinance ụgwọ a n'ụzọ ị nwere ike refinance ụgwọ ọ bụla ọzọ. Mgbe ahụ ị banyere ndị ọrụ na -enweghị nka dị mkpa yana nke achọrọ. Mgbe anyị enweghị ike mejupụta ọrụ dị na obodo anyị, nke ahụ na -anọchite anya nsogbu. Ọzụzụ nka bara uru na mmụta ndụ niile bụ nnukwu okwu [m ga -eleba anya]. Abụkwa m onye na -ahụ maka gburugburu ebe obibi, yabụ achọrọ m ikwu maka mgbanwe ihu igwe. Mgbanwe ihu igwe na -eme n'ike n'ike karịa ka onye ọ bụla tụrụ anya ya. Oke osimiri na -arị elu na ọkara oge [a tụrụ anya na ọ ga -ebili]. Nke ahụ abụghị ọgbọ pụọ. Mgbanwe dịgasị iche iche nke ọdachi ndị a bụ nnukwu ibu n'elu akụrụngwa anyị.
Nkwado: Ka anyị gaa n'ihu na Jenụwarị 2017. Ihe niile agaala nke ọma, ugbu a ị bụ onye otu ọgbakọ na -anọchite anya District California 2. Kedu ihe mbụ ị ga -eme dị ka onye nnọchite anya?
Ọ BỤ: Ka ị mara, m na -amụmụ ọnụ ọchị na ntị ugbu a. Daalụ maka itinye foto ahụ n'isi m. Otu n'ime ihe mbụ bụ ịga ezumike akwụ ụgwọ. Nke ahụ bụ ihe ga -eme. Anyị bụ naanị mba mepere emepe na -enweghị ya. Nke ahụ dị mkpa na ọrụ m dị ka nwanyị, dịka nne (otu ụbọchị, enwere m olileanya), yana maka ndị nna na ụmụaka. Ọ ghaghị ime.
Ugbu a mgbe ndị mmadụ na-ekwu maka mgbanwe ihu igwe, ihe ha na-ekwukarị bụ ibelata ọdachi ndị ọzọ na ibelata ọnọdụ ikuku ndị ọzọ, anaghị emetọ nke ukwuu, na-agba mbọ hụ na anyị anaghị ebute mmebi ọzọ. Gịnị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike wepụta ma wepụta ikuku griinụ nke dịla ebe ahụ? Nso ke oro ọwọrọ? Azịza ya dị n'okpuru ụkwụ anyị: Ọ bụ ala. Ọ bụrụ na anyị nwere ike chọpụta ụzọ anyị ga -esi wepụ ikuku carbon dioxide site na ikuku wee tinye ya n'ime ala, ọ ga -aba ezigbo uru ma mee ka ala baa ọgaranya maka ọrụ ugbo na ọrụ ugbo. Anyị nwere ike kpalie ọrụ ugbo carbon ka ọ ghara ịmịcha ikuku griin haus. Ọ bara uru na akụ na ụba, enwere ike na teknụzụ, ọ bara uru maka akụ na ụba, ndị ọrụ ugbo na ndị na -ahụ maka gburugburu ebe obibi. Ndị ahụ bụ ihe abụọ kachasị elu m, yana ụgwọ ụmụ akwụkwọ. Anyị nwere iji nye ndị mmadụ ohere refinance na 100 percent. Anyị kwesịrị ịtọlite ​​ụdị mmemme mgbazinye ego nwata akwụkwọ site na ọrụ mba.
N'ụzọ doro anya, echeghị m na m ga -amịpụ mkpịsị aka m wee chee na nke a ga -eme. Ma m ga -alụ ọgụ. M ga -anọgide na -alụ ọgụ, agaghị m akwụsị.
Ọmarịcha : N'ikpeazụ, gịnị ka ị ga -ekwu bụ abụ isiokwu mkpọsa gị?
Ọ BỤ: Enwere m ike ịme Beyoncé Run World? Ọ bụ ukwe. Ahụrụ m ya n'anya. Ọ masịrị m ka ọ na -akọwagharị ihe enwere ike. Anyị chọrọ ndị nlereanya nwanyị dị ike karịa nke gosipụtara na ha dị mpako na ha bụ nwanyị.
kedu ihe mere Angelina na brad ji kewaa
trans nwanyi trans nwanyi model
kedu ihe bụ rom com
jamie lynn ube na britney ube